२ आश्विन २०७८, शनिबार १८:५६
मकवानपुर, २ असोज । नेपालकै चर्चित दोहोरी रियालिटी शो ‘दोहोरी च्याम्पियन’ को उत्कृष्ट ४ का लागि तेस्रो दोहोरी भिडन्त यही शनिबार हुँदैछ । तेस्रो दोहोरी भिडन्तमा राजु केसी र डिला बिकसँग राजेन्द्र पाठक र मिना नेपालले दोहोरी भिड्दैछन् । यी दुबै टिमले यसअघिको दोहोरी भिडन्तका क्रममा दर्शक र निर्णायकहरुबाट प्रशंसा पाएका थिए । शनिबार उनीहरुको प्रस्तुति पश्चात दर्शक भोटको आधारमा अर्को शनिबार रिजल्ट हुनेछ । यी दुबै जोडीहरु गायक गायिकाकै रुपमा चिनिएका र लाईभ दोहोरीमा दर्शकहरुको मन जित्न सफल जोडीहरु हुन् । दुबै टिम बलियो भएकोले एकअर्कालाई पछि पार्न यो जोडीहरुले दमदार दोहोरी भिडन्त गर्नेछन् । यी दुई जोडीको यो कडा प्रतिस्पर्धामा कसले बाजी मार्ला त ? आखिर को जानेछ उत्कृष्ट ४ अर्थात सेमिफाईनलमा ? तपाईको विचारमा यी दुई जोडीमध्ये कुन जोडीको जित्ने सम्भावना बलियो छ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् ।
दोहोरी च्याम्पियनको उत्कृष्ट ८ मा पुगेका पाँचौँ जोडी हुन् राजु केसी र डिला बिक । उनीहरुले यसअघि उत्कृष्ट १६ को दोहोरी भिडन्तमा चर्चित जोडी बबिता बानियाँ जेरी र शंकर क्षेत्रीसँग दोहोरी भिडेका थिए । यो दोहोरी भिडन्तमा राजुलाई दुई जना निर्णायकहरुले फाईभ स्टार प्रदान गरेका थिए । त्यस्तै उनलाई निर्णायक प्रजापति पराजुलीले फो स्टार र सिता थापाले थ्री स्टार प्रदान गरेका थिए । डिलालाई निर्णायक चन्द्र शर्माले फो स्टार र अन्य निर्णायकहरुले थ्री स्टार प्रदान गरेका थिए । उनीहरुले यसअघि उत्कृष्ट २४ को दोहोरी भिडन्तमा निर्णायकहरुबाट ५८४.५ अंक प्राप्त गर्दै १६.५ अंकको अन्तरमा दोहोरी भिडन्त जितेका थिए । यो उत्कृष्ट २४ को क्रममा सर्वाधिक बढी अंकका आधारमा हारजित भएको दोहोरी भिडन्त थियो । डिला सुर्खेतकी र राजु स्याङ्जाका हुन् ।
दोहोरी च्याम्पियनको उत्कृष्ट ८ मा पुगेका छैटौँ जोडी हुन् राजेन्द्र पाठक र मिना नेपाल । उनीहरुले उत्कृष्ट १६ को दोहोरी भिडन्तमा चर्चित जोडी प्रदिप रोका र कल्पना दाहालसँग दोहोरी भिडेका थिए । यो दोहोरी भिडन्तमा राजेन्द्रलाई सबै निर्णायकहरुले फो स्टार दिएका थिए भने मिनालाई दुई जना निर्णायकहरुले थ्री स्टार र दुई जना निर्णायकहरुले फो स्टार दिएका थिए । यसअघि उत्कृष्ट २४ को दोहोरी भिडन्तमा उनीहरुले निर्णायकहरुबाट जम्मा ५९९ अंक प्राप्त गर्दै ५ अंकले हार व्यहोरेका थिए । तर उनीहरु वाईल्ड कार्डमार्फत पून शोमा प्रवेश गरेका थिए । मिना नेपाल ओखलढुङ्गाकी र राजेन्द्र नुवाकोटका हुन् । हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री–